7 Steps To Take When Getting a Business Loan From a Bank - Sicko News
Raasamaalku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ganacsi kastaa lahaado si ay si habsami leh u socodsiiso howlaheeda. Inbadan oo naga mid ah waxay leeyihiin fikrado cajiib ah oo marka la hirgaliyo waxay horseedi kartaa abuuritaanka magaalooyin ganacsi oo cusub. Si kastaba ha noqotee, caqabadda kaliya ee ka dhaxaysa fikradaha iyo bilaabida ganacsiga ayaa ah la’aanta caasimada.
Helitaanka Amaah Ganacsi
Xulashada ugu caansan ee helitaanka maalgalintu waa amaah ay bixiyeen bangiyada iyo sidoo kale hay’adaha maaliyadeed ee kale. Maalmahan, helitaanka amaahdu uma fududa sidii hore. Xiisadda dhaqaale-dhaqaale ee dhacday dhowr sano ka hor ayaa bangiyada ka dhigtay inay xaddido amaahda ganacsiyada yaryar. Markaa waa muhiim inaad adigu ogaato talaabooyinka lagama maarmaanka u ah inaad ka hesho amaah deyn bangi si aad u wanaajiso fursaddaada helitaanka oggolaanshaha. Halkan waxaa ah toddobo tallaabo oo aad qaadi karto markii aad bangiga ka codsaneyso amaah ganacsi.
Hayso qorshe ganacsi oo habboon
Si loo helo deyn, baananka badan waxay kaaga baahan yihiin inaad leedahay qorshe maaliyadeed oo xoog leh kaasoo keenaya waxa ganacsigaagu kujiro. Waxay sameyneysaa horudhac ku saabsan qofka aad tahay iyo waxa ganacsigaagu ku saabsan yahay. Qorshe ganacsi waa inuu awood u leeyahay inuu caddeeyo himilooyinka ganacsiga, himilada iyo sida loo maamuli doono si loo gaaro dhammaan ujeeddooyinka la sheegay. Xusuusnow qorshe ganacsi oo aad u weyn micnaheedu waa in ganacsigu u badan yahay inuu ku guuleysto iyadoo loo eegayo maskaxda deyn bixiyaha.
Sheeg sida aad u rabto inaad dhaqaalahaaga ku bixiso
Bangiyadu waxay leeyihiin u janjeera inay qiimeeyaan sida codsadaha amaahda uu doonayo inuu u isticmaalo lacagaha la amaahday. Haddii aad rabto inaad iibsato qalab tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad dalbato amaahda qalabka. Dhanka kale, hadaad rabto lacag si aad ganacsiga u socodsiiso kahor inta deyn bixiyuhu ku siin, waxaa kugula talin laheyd inaad dalbato amaah gaaban. Markaa, sheegashada waxa amaahdaada loo adeegsan doono waxay u sahlaysaa bangiga inuu go’aamiyo in xaddiga loo dalbaday uu buuxin doono baahiyahaaga oo dhan.
Sheeg caddadka lacagta aad u baahan tahay
Markii aad dalbanayso amaah, way fiicantahay inaad sameyso daraasad qoto dheer si aadan uxalin ama aadan uxisaabin tirada lacagta aad ubaahantahay. Tan waxaa u sabab ah xaqiiqda ah in hoos-u-dhigiddu sababi karto dhibaatooyin maaliyadeed mustaqbalka. Ku wareejinta dhinaca kale waxay ka dhigeysaa bangiga su’aal ah in baaritaan qotodheer la sameeyay kahor qorista qorshaha ganacsiga. Si looga fogaado dhammaan shakigaas, hayso miisaaniyad wanaagsan oo leh saadaalin maaliyadeed oo habboon.
Ka taxaddar natiijada dhibcahaaga
Maalmahan, bankiyada oo dhami waa inay hubiyaan haddii codsade kasta uu xaq u leeyahay in la siiyo amaah. Markii aad codsaneyso caawinaad lacageed, waxaa lagugula talinayaa inaad fiiriso warbixinnadaada amaahda iyo dhibcahaaga. Dhibcaha dhibco ee 700 iyo wixii ka sareeya ayaa aad u fiican. Haddii dhibcahaagu ka hooseeyaan 680, way kugu adkaan doontaa inaad hesho deyn laakiin waxaad u baahan kartaa inaad tixgeliso amaahda ku saleysan dakhli mid kale. Haddii dhibcahaagu hooseeyaan, si adag u shaqee oo kor u qaad intaadan dalban amaah kasta.
Nadiifi warbixintaada amaahda
Mararka qaar khaladaad ayaa ku dhici kara warbixintaada amaahda oo haddii aadan taxaddarin, waxay si xun u saameyn kartaa natiijada dhibcahaaga. Tani waa sababta ay marwalba kugula talineyso inaad si joogto ah ula socoto amaahdaada ganacsiga iyo feylasha deynta shaqsiyadeed. Haddii ay dhacdo inaad aragto khaladaad, la xiriir wakaaladda warbixinta amaahda isla markaaba si loo saxo oo kor loo qaado natiijada adoo ka qaadaya waxyaabaha khaldan, haddii kale deyn laguma ogolaan doono bangi marka qiimeyntaada deynta ay hooseyso.
Qiimee dhammaan fursadaha amaahdaada
Kadib markaad hubiso warbixinta amaahdaada oo aad hubiso inay hagaag tahay, waxaa la joogaa waqtigii la baari lahaa laana heli lahaa liistada bangiyada suurtagalka u ah kordhinta nooca amaahda aad ubaahantahay. Dooro bangiga ku bixiya amaahda sicir dulsaar hooseeya oo bixiya tilmaamaha oggolaanshaha ugu dabacsan.
Hayso diiwaanada maaliyadeed ee saxda ah
Ka helitaanka amaahda bangiga mid fudud ayay noqoneysaa markaad leedahay caddeyn maaliyadeed oo habboon. Bangiyadu had iyo jeer waxay rabaan inay hubiyaan xaashida dheelitirkaaga, caddaymaha socodka lacagta iyo caddaymaha dakhliga si loo hubiyo inaad karti u leedahay bixinta amaahda iyo in kale. Tan micnaheedu waxaa weeye haddii aadan hayn haynin diiwaanadan, waxaa la joogaa waqtigii la bilaabi lahaa maadaama ay mustaqbalka kaali karaan caawinaadda markaad dalbanayso amaah.
7 Steps To Take When Getting a Business Loan From a Bank business loan business loan from bank business loans Steps To Take When Getting a Business Loan From a Bank tips and tricks When Getting a Business Loan From a Bank